Roobab lagu diirsaday oo ka da’ay deegaano badan oo ka tirsan Puntland – Puntlandtimes
Roobab lagu diirsaday oo ka da’ay deegaano badan oo ka tirsan Puntland
GAROWE(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Kar Kaar ayaa sheegaya in roobab lagu diirsaday ay ka da’een qaybo kamid ah gobolkaasi Kar Kaar gaar ahaan deegaano dhaca Bariga Kar Kaar.
Roobabkani oo ahaa kuwo biyo dhig wacan leh ayaa waxaa ku diirsaday dhamaanba duunyada iyo dadka, waxaana ay kusoo beegmayaan roobabkani xili abaar xoogan ay ka jirto deegaano badan oo kamid ah gobolka Kar Kaar iyo deegaanada kale ee Puntland.
Dhanka kale xili xaalado biyo la’aan ah ay ka jireen muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxaa ka hooray deegaano kamid ah gobolka Sanaag roobab lagu diirsaday.
Degmada Ceel Buh iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa roobabkani heleen, waxaana si weyn u soo dhoweeyey dadka reer guuraaga ah ee abaartu ay saamaysay.
Deegaano kale oo ka tirsan gobolka Bari ayaa waxaa iyaguna helay roobab lagu diirsaday inkastoo ay yar yihiin meelaha uu roobku helay, waxaana kamid ah deeganadaasi Tuulada Ceeley oo qiyaastii 40 KM dhanka bari ka xigta magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kar Kaar oo xalay uu helay raxmaadka eebe.
Roobka Ceeley iyo nawaaxigeeda ka da’ay ayaa buuxiyey guud ahaan dhulka biya qabatinka leh iyo balliyada, xili abaar xoogan iyo xaalad biya la’aan ah ay ka jirto deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi.
Dhanka gobolka Nugaal tuulada Xaar xaar oo ka tirsan degmada Buurtinle iyo miyiga hoostaga ayaa iyaguna roobsaday.
Roobabkani ka da’ay tan iyo habeenkii xalay ahayd deegaano badan ayaa kusoo beegmaya xili xaalado cakiran ay ka jiraan dalka isla markaasna abaartu ay saamaysay dad iyo duunyaba.
Raxmadka Eebe halagu mahadiyo oo yaan la kibrin reer puntland wayahan danbe xalku maficnan waxana losababeynaya,Laluush Eex Xaqdaro fara badan oo aan laso kobi karin in aay socotay,Dad yohow iska daaya sharci darada,hadi kale waxa imanaya afooyin khatar badan,oo Abooro Cuduro & wax kale oo aan khayr lahan.
scw walaal afsomaliga iska hagaajiya. sax ma aha roob aw dadweynuhu soo howeeyeen. waxaa fiican Alle lagu mahadyey
Walala ALLAH ayaa mahad leh waana in lagu shukri yaa